Caaqilkii weeynaa ee Luqmaan alxaakim iyo murtidiisii macaaneyd ka aqriso – Biyacade
Caaqilkii weeynaa ee Luqmaan alxaakim iyo murtidiisii macaaneyd ka aqriso
XIKMAD AAD U QIIMO BADAN.
Caaqilkii weynaa ee Luqmaan Al-Xakiim ayaa
wuxuu yiri Xikmadahaan Murtida
Xambaarasan ee ah:-
1- Haddii ay Dadku kugu Faanaan Hadal
Wanaagooda, waxaad ugu Faantaa Aamus
2- Haddii aad Qof Wanaag u Gasho iska jir
inaad Xasuusiso, Haddii Adiga uu Qof Wanaag
kuu galana iska jir inaad iloowdo.
3- Hadduu Maalku kaa Lumo, waxa kaa
Lumay Shey Qiimo badan, Haddii Sharaftu
kaa Luntana waxa kaa Lumay Shey aan Maal
goyn Karin, Haddii Rajadu kaa Luntana waxaa
tahay Cayr (Faqiir) wax kasta Seegay.
4- Weligaa hala Murmin Doqonka, waayo
waxa laga yaabaa in Dadka idin
Dhegeysanayaa idin kala Garan waayaan.
5- Qof doonaya inuu ka tago Raad Fiicani,
wuxuu Dadka ula Noolaadaa:-
A. Sida Qof Baahan oo iyaga isu Dhul
B. Sida Qof isku Filan oo iyaga wax Taraaya.
C. Sida Masuul iyaga Difaacaya.
D. Sida Dhakhtar u Naxariisanaya.
30 June 2014 at 20:53 · Public
Previous Naxariista hooyo iyo dhaqanka cariirta
Next Maxaad ka taqaan taariikhda Ibnul Calqami shiicigii burburiyay Khilaafadii Cabaasiyiinta